Shandong Hualu Home Furnishing Technology Co., Ltd.ari chikamu cheShandong Huajian Aluminium Boka. Yakatangwa muna2017, ikambani inosanganisa dhizaini uye kutsvagisa uye kuvandudza maprofayiri epamba, mapurani ekushongedza uye zvishongedzo, maitiro akajairika, kudzidziswa kwekuvaka uye nhungamiro, kutengesa musika uye kusimudzira kwechiratidzo Anosanganisirwa ekutsigira nekugadzirisa bhizinesi realuminium system system nemasevhisi.
Zvakajairika Aluminium Profiles
Aluminium alloy hwindo rinoshandiswa zvakanyanya mumunda weinjiniya yekuvaka nekuda kwerunako rwayo, kuisa chisimbiso uye kwakasimba simba. Mushure mekurapwa kwepamusoro, aruminiyamu alloy mbiri inopenya uye inopenya, inoratidza akasiyana mavara uye mhedzisiro.
Thermal Break Aluminium Window & Musuwo
Wanga uchiziva here kuti machira ekupisa akange asinganyanyo shandiswa makore gumi? Kutenda kumakambani akaita seHuajian Technologies, michina inodiwa kugadzirisa machira epasuru ikozvino yave kuwanikwa. Asi chii chaizvo chiri kupisa kupisa, uye nei iri nhau hombe kudaro?
Hwindo & musuo aluminium profile
Shandong EOSS Windows & Doors System Technology Co .. Ltd ndeye Shandong Huajian Aluminium Boka Co, Ltd, inonyanya kuita basa rekuvandudza windows, madhoo uye machira emadziro masisitimu uye zvigadzirwa zvehardware dhizaini, kugadzira, kutengesa & kuisirwa, commerce, software kuvandudza, kutengesa uye sevhisi.EOSS kambani inounganidza weChina wepamusoro-chikamu mainjiniya paFenestration munda.
Aluminium Fomu Yekushanda Plate
Sefomu nyowani yekuvaka mumakore achangopfuura, kuvaka aruminiyamu formwork kunogona kuoneka mune dzimwe nyika uye dzakabudirira mupasi rose, iri nani pane yechinyakare template mune zvinhu, kuvaka maitiro, mutengo wemari, hupenyu hwebasa, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza zvichingodaro. Panguva imwecheteyo, inogona kudzikisa mutengo weprojekiti, kuvandudza mhando yeinjiniya, kumhanyisa nguva yekuvaka uye kudzivirira kukanganisa kwevanhu pakuvaka, mushure mekubviswa kwebhodhi pasina yakasara enjiniya tsvina, kuti ipe yakachengeteka uye yakasimukira nzvimbo yekushandira yevashandi vekuvaka.